Golaha Wasiirada XFS oo dib u sixid ku sameeyay go’aanadii Amniga & M.G.Banaadir oo kaalin lasiiyay - Caasimada Online
Home Warar Golaha Wasiirada XFS oo dib u sixid ku sameeyay go’aanadii Amniga &...
Golaha Wasiirada XFS oo dib u sixid ku sameeyay go’aanadii Amniga & M.G.Banaadir oo kaalin lasiiyay
Muqdisho (Caasimada Online)-Golaha Wasiirada Xukuumada Somalia ayaa dib u sixid ku sameeyay go’aanadii dhinaca amniga ahaa ee shalay ay soo saareen Golaha.
War saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Ra’isul wasaare Xasan Kheyre ayaa lagu sheegay in dib u sixid lagu sameeyay go’aanadii ay isla gaaren Golaha Wasiirada ee lagu xoojinaayay Amniga magaalada Muqdisho.
Xafiiska Ra’isul wasaaraha iyo guud ahaanba Golaha Wasiirada ayaa maamulka Gobolka Banaadir ku amaanay doorka dhisida Golaha Ammaanka ee Gobolka Benadir.
Dib u sixida qodobadii hore kadib waxaa la faray dhammaan Hay’adaha amniga inay si dhow ula shaqeeyaan Golaha amaanka maamulka Gobolka Banaadir.
Sidoo kale, Golahu waxey isla fahmeen inay muhiim tahay in Golaha Amniga Golbaka Banaadir ay wax weyn ka qaban doonaan ammaanka caasimada.
HOOS KA AKHRISO SAXIDA LAGU SAMEEYAY GO’AANKII GOLAHA WASIIRADA
Mogadishu, 12 May 2017 – Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa Khamiistii kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre ku gaaray go’aamo amniga iyo xasilinta lagu dar-dargelinayo.